Onjiniyela Bangaphambili be-Oculus neMagic Leap Bajoyina i-Apple | Ngivela kwa-mac
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, sikwazise ngenhlolokhono emithonjeni yezindaba yaseMelika lapho uTim Cook asho khona ukuthi iqiniso elingokoqobo nokwengezelelwe liyikusasa, kepha okumthokozisayo ngempela, ngakho-ke inkampani eseCupertino, iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona elihlinzeka ngamathuba amaningi nezinzuzo zesikhathi esizayo kuneqiniso langempela, okusetshenziswa kwayo okuyinhloko kunikelwe ekuthuthukiseni amagama evidiyo. Iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona liyindlela efanayo naleyo iMicrosoft eyilandele ngephrojekthi yayo yeHoloLens futhi inhloso yayo okwamanje ibhekiswe ezinkampanini ezinkulu ngaphezu kweNASA.
Ngokusho kweBusiness Insider, abakwa-Apple baqashe owayeyisisebenzi seMagic Leap nomunye oqhamuka e-Oculus. UZeyu Li, owayeyisisebenzi sakwaMagic Leap, ubesesebenze e-Oculus isikhathi esingaphezu konyaka futhi usejoyine abasebenzi njengo-Senior Engineer. U-Yury Petrov wayekade esebenza e-Oculus njengonjiniyela ocwaningweni, okuyisikhundla esifanayo azosibamba kule nkampani ezinze eCupertino. Uma sibheka iphrofayili ye-LinkedIn, siyabona ukuthi uPetrov wenza kanjani izifundo ze-psychophysical and physiological isipiliyoni se-multisensory seqiniso langempela.
Lo nyaka ngunyaka ocacile wokuthi iqiniso lingasetshenziswa emakethe, ngemuva kokwethulwa kwe-Oculus Rift, iHTC Vive futhi kungekudala izingilazi zangempela zeSony PlayStation VR, okwamanje ezosebenzisana ne-PlayStation 4 yamaJapan ngokuqinile. Nakulokhu u-Apple ungowokugcina ukuqhamuka nobuchwepheshe ezinye izinkampani ebezisebenza iminyaka ethile. Asazi ukuthi yimuphi umqondo u-Apple awucabangayo mayelana nedivayisi enokwenzeka yalolu hlobo, kepha kubonakala sengathi kunjalo kuzofanele silinde iminyaka embalwa ukuze ibone ukukhanya.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Onjiniyela bangaphambili be-Oculus neMagic Leap bajoyina i-Apple